Ithegi: uqeqesho lokuthengisa | Martech Zone
Ithegi: uqeqesho lokuthengisa
NgoLwesibini, Meyi 12, 2020 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
Njengoko ishishini lakho likhupha amaqela athengisayo, uyakufumanisa ukuba ukukhangelwa komxholo osebenzayo kuya kuba yimfuneko yasebusuku. Amaqela ophuhliso lweshishini akhangela amaphepha amhlophe, izifundo zetyala, amaxwebhu epakethe, ukujonga ngokubanzi imveliso kunye nenkonzo… kwaye bafuna ukuba zilungelelaniswe ngumzi mveliso, ukukhula kwabathengi, kunye nobungakanani babathengi. Kukuthini ukuVumela ukuThengisa? UkuXhobisa ukuthengisa yinkqubo yeqhinga lokuxhobisa imibutho yokuthengisa ngezixhobo ezifanelekileyo, umxholo kunye nolwazi lokuthengisa ngempumelelo. Ixhobisa abathengisi ukuba bathumele kwakhona
IGoogle Primer: Funda ishishini elitsha kunye neZakhono zokuThengisa ngeDijithali
NgeCawa, nge-28 kaJanuwari 2018 NgeCawa, nge-28 kaJanuwari 2018 Douglas Karr
Abanini bamashishini kunye nabathengisi bahlala bexakekile xa kufikwa kwintengiso yedijithali. Kukho indawo yokucinga ukuba ndityhala abantu ukuba bamkele njengoko becinga ngentengiso kunye nentengiso kwi-Intanethi: Kuhlala kuguquka-onke amaqonga ahamba notshintsho olukhulu ngoku-ubukrelekrele bokufunda, ukufundwa komatshini, ukusetyenziswa kolwimi lwendalo, inyani ebonakalayo, inyani exubekileyo, idatha enkulu, i-blockchain, i-bots, i-Intanethi yeZinto… yeesh. Ngelixa oko kuvakala kukoyikisa, gcina engqondweni ukuba konke kuya
Utshintsho oluphambili ekufuneka ulwenzile kwiNtlanganiso yakho yoNyaka yokuThengisa
NgoLwesithathu, Novemba 15, 2017 UAshley Welch
Kuya kuba lelo xesha lonyaka kwakhona, xa iinkokheli zoThengiso kunye nokuXhobisa ukuThengisa ziceba iintlanganiso zabo zonyaka zokuqalisa. Ayingomsebenzi mncinci lo. Ukongeza kulungiselelo olusisiseko lokukhetha indawo oya kuyo, ukuvimba amagumbi kunye nokufumana indawo yokuhlangana, kukho uxinzelelo olungachazwanga lokuya entlanganisweni yonyaka ophelileyo. Singayenza njani ibe nkulu kwaye ibe ngcono? Zeziphi izithethi zeendwendwe eziza kukhuthaza? Ngawaphi amabhaso aya kuthi atsho kakhulu kubadlali bethu abaphambili Thina
Ungayiphucula njani iNtsebenzo yeQela lakho lokuThengisa
NgoLwesihlanu, Februwari 10, 2017 NgoLwesihlanu, Februwari 10, 2017 Douglas Karr
Uninzi lwabahlobo bam ngabantu abathengisayo. Ngokunyanisekileyo, andizange ndihloniphe ngokupheleleyo ubugcisa babo de ndiqale ishishini lam kwaye ndibethe. Ndinabaphulaphuli abaninzi, ubudlelwane obuqinileyo kunye neenkampani ezindihloniphayo, kunye nenkonzo enkulu abayifunayo. Akukho nto ibaluleke kangako okwesibini ndangena emnyango ukuze ndihlale phantsi kwintlanganiso yokuthengisa! Andenzanga nto ukuzilungiselela kwaye kungekudala ndafumana
NgoLwesihlanu, Septemba 5, 2014 Douglas Karr
Sihlala sithetha ngentengiso yengeniso evelisiweyo, kodwa hayi ngelahleko xa ingahambi kakuhle. Ukuthengisa ngumdlalo wegazi kwiinkampani ezininzi kwaye kubonakala ngathi akukho kunyamezeleka kule mihla kubaqeqeshi bezentengiso ukuze banyuse umgangatho, bakhe ubudlelwane kunye nokuguqula abathengi. Umphathi wentengiso unesikhundla esingafikelelekiyo sokukhuthaza nokuqhuba abasebenzi ukuba bahlangane kwaye bagqithe kwiinjongo. Fumana umphathi ongalunganga ngaphakathi kunye nepheleleyo